Dhaqan-kala-duwan - Chengdu Dacheng New Energy Techenology Co. Ltd.
Tayada u doodista
Maxaa inaga dhigaya inaan ku adkeyno raasamaal, hal-abuurnimo iyo horumarin in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo milatari ah oo ku saabsan soo-celinta qalabka iyo tikniyoolajiyadda kulanka batroolka? Laga soo bilaabo cilmi-baarista iyo horumarinta, naqshadeynta, soo-saarka, hal-abuurka iibka adduunka. Ku adkeyso raadinta guulaha shaqo ee muuqda iyo qaab nololeedka, oo samee wax kasta oo suurtagal ah.
Abuur jawi shaqo wanaagsan oo wax ku ool ah, ka dhig shaqaaluhu inay dareemaan raaxo, shucuur iyo jacayl ay u qabaan inay shaqeeyaan. Samee waxyaabo macno leh dabeecad qumman, ku raaxayso raaxada shaqada, ku kasbo dareen waxqabad, iyo inaad ogaatid qiimahaaga.
Hal-abuurnimo joogto ah, iskaashi guul-guul
Cusbooneysiin joogto ah, iskaashi guul-wadaag ah Dacheng New Energy Technology Co., Ltd. waxaa haga fikrad horumarineed oo cilmiyaysan, waxay dejisaa istiraatiijiyado horumarineed, waxayna ku dhaqantaa si ku habboon oo waafaqsan shuruudaha dhabta ah ee shirkadda. Si xawli ah kor ugu qaadida horumarka isku-dubaridka dhaqaalaha, bulshada iyo koritaanka shaqaalaha;
Dhaqaalaha suuqa ma aha oo kaliya dhaqaale tartan, laakiin sidoo kale waa iskaashi dhaqaale iyo iskaashi dhaqaale. Tartanku waa lama huraan, laakiin iskaashi iyo isbahaysi waa isbeddelka horumarka mustaqbalka.
Jihada mustaqbalka ee soosaarida gawaarida waa horumarka cagaaran. Deegaanka warshadaha gawaarida cusub ee tamarta, waxay keentay fursado horumarineed oo waawayn, waxayna noqotay awood cusub oo dhexdhexaad iyo xawaare hoose, xawaare sare iyo gaadiid masaafo gaaban ah. ee nidaamka awoodda iyo kor u qaadista isbeddelka qaab-dhismeedka warshadaha baabuurta, kaas oo ay qiimeeyeen waddammada adduunka oo dhan. Waxaan nahay adeeg bixiye qeybaha muhiimka ah ee gawaarida korontada si loo gaaro "waxtarka sare, ilaalinta deegaanka iyo keydinta tamarta".